Yeyiphi eyona mihla ibalulekileyo kunye neminyhadala eMorocco? | Ukuhamba kwe-Absolut
Imihla ebalulekileyo kunye neeholide eMorocco
UAna L. | | Morocco
En MoroccoNjengakuwo onke amazwe, kukho uthotho lweeholide kunye nemihla emiselweyo, ezinye zinento yokwenza neziganeko zembali kweli lizwe, ezinye ziiholide zonqulo, kunye nemihla esinokuthi siyibize njengehlabathi, njengoSuku lwaBasebenzi, ngoMeyi 1, okanye ngoMatshi 8, uSuku lwaBasetyhini lwaMazwe ngaMazwe. Ukongeza koku, zininzi iindlela zokundwendwela kunye nemibhiyozo yasekhaya kunye neentsuku eziqhelekileyo zeminyhadala, ezinje ngomnyhadala weentyatyambo zeamangile, umnyhadala wenkamela kunye nezinye ezininzi endizakukucacisela zona. Ke Ukuba uhamba ukuya eMorocco ndincoma ukuba ukhangele imihla xa unokuthi uhambelane neminye yale mibhiyozo, zombini zilungile, kwaye uzonwabele, okanye "ezimbi" ngengqondo yokuba unokufumana izakhiwo ezininzi ezivaliweyo okanye ubomi emini ngemigangatho ephantsi, njengakwimeko yokudibana neRamadan.
Kweli nqaku ndiza kuzama ukukwazisa ukuba ziyintoni na zonke ezi ntlanganiso kunye neziganeko, kodwa Kukho into ebalulekileyo ukuba ithathele ingqalelo, kwaye yile yokuba iMorocco lilizwe elinamaSilamsi, uninzi lweminyhadala yenkolo yayo ayibhiyozelwa ngemini enye ngonyaka, kodwa ixhomekeke kwikhalenda yenyanga.
1 Imibhiyozo yezenkolo
2 Imibhiyozo yezembali
3 Umthendeleko weTrone
4 Iminyhadala yemveli kunye neziganeko
Njengoko bendichazile ngaphambili iiholide zonqulo (zamaSilamsi) zilawulwa ngu Hejira, yikhalenda yenyanga, engaphantsi kweentsuku ezili-11 kuneGregory.
Le mibhiyozo yile:
URas el-Sana, 1 we Muharram, unyaka omtsha wamaSulumane. Ngokwenyani le mini ayinayo imvelaphi yenkolo, kodwa uninzi lwamaSilamsi lusebenzisa umhla ukukhumbula ubomi bomprofeti uMuhammad kunye neHijra okanye ukufuduka awenza eMedina.
Uncedo the-i-moult, 12 ye Rabi I-Auel, Isikhumbuzo sokuzalwa kukaMuhammad. Eyona nto ixhaphakileyo kukubhiyozela olu suku nosapho nakwiimosque. EMaghreb, isikhumbuzo sokuzalwa kukaMuhammad sinxulunyaniswa nombono wezithethe ezibandakanya i-'amdah okanye i-qasidas ', imibongo edumisa umprofeti kwaye efundwa ngakumbi ngalo mhla.
Uncedo IKebir, Ukusuka kwiDu 10 ukuya kwi-13 UAlhaya, Umthendeleko weMvana kunye nokukhumbula idini lika-Abraham. Kubhiyozelwa ngamaSilamsi kwihlabathi liphela ngokwenza idini lesilwanyana, njengesiqhelo inkomo okanye imvana, njengombulelo kuThixo ngokusindisa ubomi bukaIshmayeli, unyana womprofeti uAbraham. Inyama yahlulwe yayahlulo sesithathu, enye iya emntwini okanye ebantwini abanika irhamncwa, enye iye kwabiwa phakathi kwezihlobo ize eyesithathu yokugqibela iye kwabo bayifunayo, nokuba bayayiphi inkolo, ubuhlanga okanye ubuzwe.
Uncedo el-Landela, xa iRamadan iphela. Ibhiyozelwa iintsuku ezintathu kwaye ubusuku phambi komhla wokuqala walo mnyhadala ngumbhiyozo. Ekuseni kusasa, uluntu luhlanganisana kwimithandazo eyahlukeneyo kwaye lubhiyozela isidlo sakusasa esibonisa ukuphela kokuzila kwenyanga ebaluleke kakhulu kwihlabathi lamaSilamsi. Amadoda anxiba iimpahla ezintsha ezimhlophe ezibonisa ubunyulu. Imini yonke ibhiyozelwa emakhayeni ngokutya izitya ezikhethekileyo eziphekelwe lo msitho.
EMorocco kukho uthotho lwemibhiyozo enxulunyaniswa nokudlula kwelo lizwe, njenge:
Umthendeleko wokunyaniseka, ubhiyozelwe nge-14 ka-Agasti
Isikhumbuzo soguquko lweKumkani kunye naBantu, Agasti 20. Uguquko lwaseMoroccan lukhunjulwa apho uMohammed V nabantu bakhe bajoyina kumlo wenkululeko.
Isikhumbuzo soMatshi oGayo. Ukukhunjulwa kolu hambo kwaqala nge-6 ka-Novemba ngo-1975 ngabemi baseMorocco kunye namajoni, phantsi komyalelo ka-King Hassan II, ukuze bahlasele kwaye bongeze i-Western Sahara.
Iqela lenkululeko. Nangona i-Independence yaseMorocco yafezekiswa ngo-Matshi 2, 1956, u-Mohammed V akazange ayibhengeze kude kube ngu-Novemba ngo-18 kwakuloo nyaka kwaye ngumhla ekubhiyozelwa ngawo.
EMorocco owona mthendeleko ubaluleke kakhulu okanye ongumfuziselo nguMthendeleko weTrone, ngeli xesha nge-30 kaJulayi. Ngumbhiyozo wesizwe wokukhumbula ukubekwa etroneni kolawulo olulawulayo, u-Mohamed VI. Umthendeleko weTrone ubhiyozelwa ngobunono kwiRoyal Palace kwaye ujikeleze usapho lwasebukhosini lwaseMoroccan.
Imvelaphi yalo mnyhadala ususela emva ku-1933Ngunyaka apho ukubekwa etroneni kukatatomkhulu wangoku, uSultan Mohammad Yusuf, kwabhiyozelwa kwaye kwafika inkululeko ngo-1956, yaphinda yadityaniswa yancediswa ekudibaniseni ubudlelwane phakathi kobukumkani nabantu baseMorocco.
Umsitho we Umthendeleko weTrone uquka intetho kwisizwe, ukwamkelwa ngokusemthethweni, Kwaye isetyenziselwa ukuhombisa ubuntu kwinkcubeko, kwezenzululwazi, kwezopolitiko nakwezemidlalo.
Iminyhadala yemveli kunye neziganeko
Eminye yeminyhadala yemveli ebibanjelwe eMorocco yile:
Fiesta de los Almendros, entlanjeni Ameln, ebhiyozelwa ngeentsuku zokugqibela zikaFebruwari, ngeengoma, imidaniso kunye nemidaniso yesiqhelo.
UMthendeleko weeRos, kwi IKelaat UMgouna, kwiNtlambo yase IiDades Ngokuhambelana nokuqokelelwa kweeroses zaseDamasko. Ngexesha lomnyhadala kubakho imingqungqo, iingoma kunye neshawa yezilwanyana.
Umnyhadala woMculo waseDesert, kwingingqi ye ITafilalet apho amagcisa aseArabhiya naseAfrika enza khona iveki yonke. Umculo uyahluka, Ukusuka kwiblues ukuya kuqamba lwabantu bendabuko.
Umnyhadala weNkamela, kwi Guelmim. Namhlanje kuye kwaba ngumtsalane kubakhenkethi, nangona kugcina iinkumbulo zomthendeleko wokuqala. Inkqubo ye- Guedra, umdaniso oqhelekileyo apho umfazi adanisa khona kwisandi segubu njengomnikelo kuThixo.
Ezi zimbalwa, kodwa unyaka wonke zininzi iziganeko zenkcubeko kulo lonke elaseMorocco.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuhamba kwe-Absolut » Imihla ebalulekileyo kunye neeholide eMorocco
Nanjengoko loo nto ingacaciswanga kakuhle kwinto endiyicelileyo !!!!
amaxhegokazi akrakra callenseee
Iintaba kunye nemilambo yaseMorocco
Iidolophu zaseCanada ezinemozulu efanelekileyo